Inona no atao hoe Webrooming? Inona no tsy itovizany amin'ny Showrooming? | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 8, 2016 Talata, Novambra 7, 2017 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity aho dia nikaroka fividianana fitaovana audio ho an'ny studio. Matetika aho mipoitra avy amin'ny tranokala famokarana, avy eo tranokala e-varotra manokana, fivarotana antsinjarany ary Amazon. Tsy izaho irery. Raha ny marina dia 84% ny mpividy no mizaha an'i Amazon alohan'ny hiantsenana
Inona no atao hoe Webrooming
Webrooming - rehefa mandeha any amin'ny magazay ny mpanjifa mba hividy rehefa avy nandinika ny vokatra an-tserasera.
Inona no atao hoe Showrooming
Showrooming - rehefa mividy an-tserasera ny mpanjifa aorian'ny fikarohana t
Ilay sary avy any Koeppel Direct, Webrooming Vs Showrooming: Torolàlana ho an'ny varotra antsinjarany amin'ny fiantsenana fialantsasatra, manaparitaka ny fitondran-tena amin'ny fiantsenana hatramin'ny taloha koa:
Boomers zazakely - Miantsena ao amin'ny magazay ary manome lanja ny fifandraisan'ny tsirairay ary manantena serivisy ho an'ny mpanjifa mahay.
Millennials - Miantsena an-tserasera sy manome lanja ary voataona am-bava.
Generation X - Miantsena an-tserasera sy mailaka alue mifanaraka amin'ny tombontsoany sy mividy tantara.
Generation Z - Miantsena an-tserasera sy amin'ny alàlan'ny finday avo lenta ary manome lanja fihenam-bidy manokana, fandefasana maimaim-poana, tombontsoa azo antoka.
Ny infographic dia mametraka ny zavatra rehetra tokony ho fantatry ny mpivarotra momba ny Webrooming vs. Showrooming, ao anatin'izany ireo karazana vokatra voadona indrindra amin'ireo fironana ireo, ary koa ny fomba hikendrena tsara indrindra ireo taranaka samihafa mandritra ny fialantsasatra.
Tags: famaritanakoeppel mivantanavarotra antsinjaranyshowroomingfamaritana showroomingwebroomingfamaritana ny Internetinona no atao hoe showroom?inona ny webrooming
Dec 9, 2016 amin'ny 1: 16 AM
Lohahevitra tena tsara tsy maintsy lazaiko !!
Ity dia zavatra mahafinaritra hamaky momba ny webrooming sy ny showrooming. Heveriko fa mety hanelingelina ny mpivarotra ny Showrooming.